Tantara: Gideona sy ny Olony 300 Lahy - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
HITANAO ve izay mitranga eto? Lehilahy mpanaﬁka eo amin’ny Israely avokoa ireo. Ireo lehilahy izay miondrika dia misotro rano. I Gideona mpitsara ilay lehilahy mitsangana eo akaikin’izy ireo. Eo am-pandinihana ny fomba ﬁsotron’izy ireo rano izy.
Jereo akaiky ny fomba samy hafa ﬁsotron’ireo olona ireo. Ny sasany dia manatsoboka ny tarehiny mihitsy ao anaty rano. Ny anankiray kosa dia mandray ny rano amin’ny tanany ka noho izany dia afaka mandinika izay mitranga manodidina azy. Zava-dehibe izany, satria i Jehovah dia nilaza tamin’i Gideona mba tsy hiﬁdy afa-tsy ireo lehilahy izay manohy miambina na dia eo am-pisotroana aza. Ny sisa, hoy Andriamanitra, dia tokony halefa hody any aminy. Aoka hojerentsika hoe nahoana.
Tao anatin’ny fahasahiranana indray ny Israelita. Ny antony dia satria tsy nankatò an’i Jehovah izy. Nahery teo amin’izy ireo ny Midiana ary nampahory azy. Koa dia nitaraina tamin’i Jehovah ny Israelita, ary nihaino ny ﬁtarainany i Jehovah.
Nilazan’i Jehovah i Gideona mba hamory taﬁka iray, ka dia nanangona lehilahy mpanaﬁka 32 000 i Gideona. Nefa taﬁka iray nisy lehilahy 135 000 no hanaﬁka ny Israely. Mbola nilaza tamin’i Gideona anefa i Jehovah hoe: ‘Maro loatra ny olonao.’ Nahoana moa i Jehovah no niteny toy izany?
Satria raha maharesy amin’ny ady ny Israely, dia mety hieritreritra fa noho ny heriny no nahazoany fandresena. Mety hieritreritra izy ireo fa tsy nila ny fanampian’i Jehovah mba handresena. Hoy àry i Jehovah tamin’i Gideona: ‘Ilazao ny lehilahy rehetra izay matahotra mba hiverina.’ Rehefa nanao izany i Gideona, dia lehilahy mpanaﬁka 22 000 no nody. Lehilahy 10 000 sisa tavela ho azy mba hiady amin’ireo miaramila rehetra 135 000.
Nefa, henoy izay nolazain’i Jehovah: ‘Mbola maro loatra ihany ny olonao.’ Koa nilazany i Gideona mba hampisotro ny olona eo amin’ny rano mandeha iray ary hampody ny olona rehetra izay manatsoboka ny tarehiny ao anaty rano mba hisotro. ‘Hanome anao ny fandresena aho miaraka amin’ireo lehilahy 300 izay nanohy niambina teo am-pisotroana’, hoy ny fampanantenan’i Jehovah.
Tonga izao ny fotoana hiadiana. Nozarain’i Gideona ho antoko telo ny 300 lahy. Nomeny anjomara iray ny tsirairay avy ary siny misy fanilo ao anatiny. Rehefa nadiva hisasaka ny alina dia niangona nanodidina ny tobin’ny miaramila fahavalo izy rehetra. Avy eo, dia niara-nitsoka ny anjomarany sy namaky ny sininy ny rehetra, ary niantso hoe: ‘Ny sabatr’i Jehovah sy Gideona!’ Rehefa nifoha ireo miaramila fahavalo, dia very hevitra sy natahotra. Nanomboka nandositra izy rehetra, ary nahazo fandresena ny Israelita.
Mpitsara toko faha-6 ka hatramin’ny faha-8.
Inona no olana lehibe nahazo ny Israelita, ary nahoana?
Nahoana i Jehovah no nilaza tamin’i Gideona fa be loatra ny miaramilany?
Firy sisa ny lehilahy tafajanona, rehefa nasain’i Gideona nody izay rehetra natahotra?
Hazavao ny fomba nampihenan’i Jehovah ny isan’ny miaramilan’i Gideona ho 300 lahy fotsiny, araka ny hita eo amin’ny sary.
Ahoana no nandaminan’i Gideona an’ireo miaramilany 300, ary ahoana no nahazoan’ny Israely fandresena?
Vakio ny Mpitsara 6:36-40.
Inona no nataon’i Gideona mba hamantarana tsara izay sitrapon’Andriamanitra?
Ahoana no amantarantsika ny sitrapon’i Jehovah ankehitriny? (Ohab. 2:3-6; Matio 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)
Vakio ny Mpitsara 7:1-25.
Inona no ianarantsika avy amin’ireo lehilahy 300 izay malina hatrany, fa tsy mba nanao tsirambina toy ny hafa? (Mpits. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Efes. 5:15-17)
Toa azy 300 lahy izay niana-javatra rehefa nijery an’i Gideona, inona no ianarantsika avy amin’ny ﬁjerena an’i Jesosy Kristy, ilay Gideona Lehibe? (Mpits. 7:17; Matio 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pet. 2:21)
Nahoana ny Mpitsara 7:21 no manampy antsika hifaly amin’ny fanompoantsika, na aiza na aiza anendrena antsika eo anivon’ny fandaminan’i Jehovah? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Jak. 4:10)
Vakio ny Mpitsara 8:1-3.
Inona no azontsika ianarana avy amin’ny fomba nandaminan’i Gideona ny ﬁfandirany tamin’ny Efraimita? (Ohab. 15:1; Matio 5:23, 24; Lioka 9:48)